Muxuu ka yiri Jordi Mestre heshiis kordhinta Lionel Messi ee kooxda Barcelona? – Gool FM
Muxuu ka yiri Jordi Mestre heshiis kordhinta Lionel Messi ee kooxda Barcelona?
Dajiye February 12, 2020
(Barcelona) 12 Feb 2020. Madaxweyne ku xigeenkii hore kooxda Barcelona ee Jordi Mestre ayaan hubin hadii Lionel Messi uu qandraas cusub u saxiixayo naadiga Blaugrana iyo in kale.
Ciyaaryahanka reer Argentina ayaa qandraaskisa Barcelona waxa uu dhici doonaa 2021, waxaana heshiiskiisa qeyb ka ah in loo oggol yahay in uu ka tago mid kasta oo ka mid ah dhamaadka xilli ciyaared kasta.
Haddaba Jordi Mestre oo ka hadlayay mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona ayaa wuxuu yiri:
“Wax fikir ah kama heysto haddii uu heshii saxiixayo iyo in kale” ayuu Mestre u sheegay Idaacadaha Cope iyo Marca.
“Aabihiis ayaa qeyb ka ah waxa xaajoodka heshiis kordhinta, had iyo jeer waan xushmeenayaa qandraaska ciyaartoyda, Kaliya waxaan faragaliyay markay ahayd waqtigii aan ka hadli lahaa”.
Si kastaba ha noqotee, Kaddib markii ay soo baxday in ay isku dhaceen agaasimaha ciyaaraha ee Barcelona Eric Abidal iyo weeraryahanka Argentina ee Leo Messi, ayaa waxaa soo baxaya warar kala gadisan iyo fikrado hor leh .
"Waa riyo ii rumowday inuu tababare ii noqdo Guardiola, sidoo kale afar sano oo qurux badan ayaan la qaatay Klopp"